ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်စာရင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း
ယခင်က ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်း (၁၂၂၄)လိုင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၂၀) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြောင်းနှင့် ပြောင်းထွက်ပစ္စည်းများအား လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ခြင်းကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၂)ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး ယခု ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်အဖြစ် ထပ်မံကြေညာသည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၂)
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံအသိပေးကြေညာခြင်း
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံအသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၂)
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို HS Code 10 digit အရ ကုန်စည် (၃၀၇၀)၊ (၈၂၆) နှင့် (၁၄၁) လိုင်း တို့ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)၊ (၁/၂၀၂၂)နှင့်(၂/၂၀၂၂)တို့ဖြင့် အသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ယခု တတိယအဆင့်အဖြစ် H.S Code6digit ဖြင့် ကုန်စည်(၅၃၆)လိုင်း သို့မဟုတ် H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၁၃၁)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၂)
Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များအား ြပင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် Tradenet.20 စနစ်တွင် လိုင်စင်နှင့်ပါမစ်များလျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသိပေးသည့်ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၂)
ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ထပ်တိုးကုန်စည်လိုင်းများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
ယခင်က ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ပြောင်း၊ နှံစားပြောင်း၊ ပြောင်းစေ့၊ ပြောင်းမှုန့်အပါအဝင် ပြောင်းအားတစ်ဆင့်မြှင့် ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်းများကို လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း
ယခင်က သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀)၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)နှင့်(၁/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထပ်မံ၍ ဂျုံစေ့နှင့် ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်းများကို လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၂)
ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀) ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအပြင် စားသောက်ကုန်အချို့၊ ပလတ်စတစ်အခြေခံ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ကုန်ချောပစ္စည်းနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းအချို့၊ သစ်သားပျော့ဖတ်၊ ပိုးချည်၊ ဝါချည်၊ ကော်ဇောကဲ့သို့သော ကြမ်းခင်းများ၊ ချည်ထည်ပစ္စည်း၊ ဖန်ထည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ စက်ဘီးနှင့် မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS. Code6digit ဖြင့် ကုန်စည် (၄၅၁)လိုင်း သို့မဟုတ် HS. Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၈၂၆)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၂)
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသား ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဦးစားပေး ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုစာရင်းအား ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၉/၂၀၂၁)
ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း
ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန်လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS.Code6digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၄၂၈)လိုင်း သို့မဟုတ် HS. Code 10 digit ဖြင့်ကုန်စည်(၃၀၇၀)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ်၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)
ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်း
ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ (၃)လ ယာယီဖြေလျှော့၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ ၁၇ /၂၀၂၁